के प्रकृतिले हामीलाई पाठ सिकाउँदैछ त - Bijay Dimdong
सद्गुरु मैले भर्खरै पढेको इटलीमा डल्फिन समुन्द्र तटको छेउछाउ आउछन ? पोल्याण्डमा हरिण रोड घुमिरहेको छन्। चीन र अरु केहि देश हरुमा प्रधुषणको स्तर केहि कम भइ रहेको छ। के यो प्रकृतिको हामीलाई पाठ सिकाउने तरिका हो ?
हामीलाई Human Being भनेर भन्छन। यस ग्रहमा अन्य कुनै पनि प्राणी लाई Being भन्दैनन्। हामी Human Being हौ यानेकि हामीलाई हाम्रो आधारभूत योग्यता थाहा छ, वा हामी किन/कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न सक्छौ। अपसोच मानवता यसलाई गलत हो भनेर सावित गर्न मै कोशिस गरिरहेका छन्। मैले यो कुरालाई तपाईहरु समक्ष्य धरै तरिकाले भनिरहेकै छु। यदि हामी व्यवाहारिकता को साथ प्राकृतिक चिजहरुको सहि सदुपयोग गर्न सकेनौ भने प्रकृति हामीलाई धरै क्रुर तरिकाले पाठ सिकाउने छ, यिन मा सबै भन्दा महत्व पूर्ण कुरा हो जनसंख्या। अहिले CORONA संक्रमण ले सबभन्दा बढी कसलाई सताई रहेको छ। मान्छेको जनसंख्या यति धेरै भयो कि मान्छेहरु हर ठाउँमा पुगी रहेछन, दुई दिन बाच्नका लागि संघर्ष गरि रहेको छ। तर यसबारे बोल्न कोहि चाहँदैनन् किन भने कोहि पनि धार्मिक समुदायको बिरुद्ध जना चाहदैनन् यो यसको बिरूद्ध छन् यसको जे कारण होस्। अ यो लामो समय देखि चल्दै आइरहेको छ यसको एउटा मूल कुरा जनसंख्या हो।
यदि मलाई सोध्नु भयो म भन्छु यहि एक समस्या हो। हुन त हामी असल छौ, तर पनि हामी धरै छौ। गजब को कुरा त हामीले मृत्युलाई नि आफ्नै हातमा लिएका छौ। चिकित्सा विज्ञान, खोप र सबै चिजको मदतले जब हामी मृत्युलाई आफ्नो हातमा लिन्छौ भने जन्मलाई पनि हातमा लिनु साधारण कुरा हो। हामी सोच्छौ कि जन्म भगवानको काम हो। हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौ कि हामी मृत्युको लागि जिम्मेवार छौ र यसको सामना गर्न तयार हुन्छौ। जन्मलाई नि यस्तै प्रकारले सामना गर्न तयार हुनु पर्छ। यदि मृत्युलाई पछाडी धकेल्न सक्छौ भने जन्मलाई नि यसरि नै धकेल्न सक्नु पर्छ। हाम्रो यो पृथ्वीमा हामी मानव उपस्थिति यति धेरै छौ कि अन्य मानिसहरु बाच्नका लागि कुनै ठाउँ नै बाकी छैन। सायद यो कुरा वैज्ञानिक रुपमा साचो होइन, सायद यो होइन।
तर मानौ तपाई एक भाइरस हो र तपाई बाच्नको लागि जनावरको शरीरमा बस्नुहुन्छ र जनावरको संख्या दिनदिनै कम हुदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के तपाई बस्नको लागि दोश्रो ठाउँ खोज्नु हुन्न ? सायद भाइरस ले त्यहि गर्यो जुन तपाईले गर्नु हुन्थो किन कि उनीहरु बस्नका लागि पर्याप्त जनावरहरु छैन। एउटा कुरा त जंगलमा बस्ने जनावरको संख्या एक दुखत तरिकाले कम भएको छ हाल सालै, दोश्रो कुरा हर दिन जनावरको मारी रहेका छौ। साल भरिमा हामी खानका लागि भनेर ७० अरब जनावरको हत्या गर्छौ। मलाई थाहा छ कि हामी त्यति धेरै खाई रहेका छैनौ। ७ अरब हामी दुनियाँ भरिमा ७० अरब जनावर को हत्या गरिरहेका छौ। तर पनि हामी यसरि नै बाचिरहेका छौ। यदि जनावरको संख्या कम भइरहेको छ भने भाइरस मान्छेको शरीरमा बच्नका लागि आफैमा बदलाब गरि रहेका छन्। मैले विज्ञानको कुरा गरि रहेको छैन यो साधारण तर्क हो। यहि तपाई एक भाइरस हुदोहो त यस्तो पकै गर्नु हुन थियो र ? अ पकै गर्नु हुन्थो। यदि तपाई बस्ने ठाउँ मेटियो या हरायो भने पकै बस्नको लागि नया ठाउँ खोज्नु हुन्छ बच्नका लागि ।
अहिले यी चिजहरुको कुरा गर्ने समय होइन। अहिले यो भन्ने समय पनि होइन हामीले यो गरेउ त्यो गरेउ हामी यसैको लाएक हौ। अहिले त हामी समझदारी देखाउने काम हो। मान्छेहरुलाई infection भयो तपाई करुणा माया र ध्यान दिनु पर्ने समय हो अहिले यो सबै कुरा गर्ने समय होइन यो। तर अब हामी एक अर्को प्राणीको बारेमा नि सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। यो बारे सोचेनौ भने हामी पनि जिउदो रहदैनौ । किन कि हाम्रो जीवन बाकी जीव भन्दा अलग छैन। खास Microorganism बारे। यो पनि हाम्रो जीवनको एक हिस्सा हो भन्ने हामीले भुल्नु हुदैन। तपाई आफ्नो साथी, घर परिवार समाज बिना नि बाच्न सक्नु हुन्छ तर Microorganism बिना बाच्न सक्नु हुन्न। यो धरै गरिरहेको छ किन कि यी जीवाणु र विषाणु यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरु जीवनको फल्ने फुल्न को लागि नया ठाउको खोजीमा छन् यसैले यिनको गतिबिधि खास तरिकाले चलिरहेको छ, के यो पाठ होइन र।
हेर्नुहोस् हर परिस्थितिमा सिक्नका लागि केहि न केहि हुन्छन यदि हामी सिक्न चाहन्छौ भने। तपाई सिक्नका लागि तयार हुनुहुन्छ भने जरुरि छैन कि कुनै आपत आउनु पर्छ। हर दिन हर पल तपाइलाई लागि सिकाईरहेको हुन्छ, तर हामी सिकी रहेको हुन्नौ। हामी त्यस्तो कुरा को प्रतिक्ष्या गर्छौ कि जो आपद बनेर आओस। अनि हामी यसलाई दर्शन बनाउन खोज्छौ। कृपया यस्तो कुरालाई दर्शन बनाउन खोज्नु राम्रो होइन। यो पनि नभनौ हो ठिक हो या कर्मको फल हो भनेर नि नभनौ। यस्तो कुराले हामीलाई कहिँ पुर्यादैन। अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कसरि भाइरसलाई यहि रोक्न सकिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा तपाई यसको माध्यम नहोस् या तपाई infected नहोस, यो पनि पक्का गर्नुहोस अर्को दोश्रो व्यक्ति नि infected नहोस्, यसको लागि सजिलो तरिका हो दुरी राख्नुहोस, हर वस्तुसग दुरी बनाउनुहोस् यो एक्लो हुने समय हो, यो मन भित्र तिर मोड्ने समय हो।
विजय डिम्दोङ २१ बैशाख २०७७, आईतवार १६:४७
by विजय डिम्दोङ २३ चैत्र २०७६, आईतवार १७:१४